(लघुकथा) ईश्वरका पाईलाहरु – शान्तिराम ढकाल
रामहरी आज शहर जॉंदैछन । धेरै भयो छोरा संग भेट नभएको ,छोरालाई साना देखि पढ्न शहरमा राखेका थिए । रामहरीले उमेर ढल्कीए पछीहरिवंश पुराण समेत लगाएर जन्मिएको थियो उनको छोरो दिपशेखर ।दिप शेखरलाइ भेट्न...
अपथ्य ( लघुकथा ) – रवीन्द्र समीर
राजमार्गमा एउटा मात्र होटेल भएको ठाउँमा ड्राइभरले बस रोकेर भन्यो – ‘ल खाजा खान ओर्लिनुस् । बिस मिनेट मात्र ।’ बसबाट ओर्लिएर बुढाले होटलतिर हेरे । होटेलमा भद्दा किसिमले सजाएर राखिएको खानेकुरालाई भोका आँखाले हेरे...
अनजान सम्झौता – आचार्य प्रभा
लघु कथा आफ्नो श्रीमानको मोबाइलमा भएको बच्चाको तस्बिर हेर्दै ऋचाले आफ्नो श्रीमानलाई लाडिएको स्वरमा भनी- “हजुरलाई साँच्चै बच्चाको प्यास जाग्न थाले जस्तो छ त्यसैले त अब मोबाइलमा पनि बच्चाको फोटो सजाउँन थाल्नु भएकोछ । अब...
विडम्बना- राम लामा अविनाशी
कथा पूर्ण दाई चौतारामा पिपलको बोटमा आढेस लागेर ढल्किरहनु भएको थियो । चुरोटको सर्को सँगै मुखबाट धुंवाको फोकाहरु निस्कदै माथि-माथि जादै हावामा बिलाउदै थिए । उहाँको आँखाको गहभरि टलपलिएका आँसुमा केही वेदना छचल्किई रहेका थिए...
निर्दोष – निशा अर्याल
करिब एघार बजेको थियो औंसीको रात । चकमन्न अ“ध्यारो, दीपक काम सकेर गन्तव्यतिर हस्याङ फस्याङ गरेर हिँड्दै थियो | बाटोको सानो पार्कछेउमा ठिंग उभिएकी एक जना नारी, अनि दुई चार जना पुरुष यताउता गर्दै...
पुलिस इन्सपेक्टरले मलाई बयान लिँदा कुनै प्रकारको बल प्रयोग नगरी लियो । म छक्क परेँ । मेरा साथीहरू मलाई मोबाइलमा एस्एमएस् गरेर उनीहरूलाईचाहिँ निकै शारीरिक यातनासाथ बयान लिएको म्यासेज पठाउँथे । कुरा के हो ?...
भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी भेग, घोरेटारदेखि डेढ घन्टाको यात्रा तय गरेपछि पुगिन्छ देवन्टार । जुन टारमा मैले मेरो जीवनकै सबैभन्दा अनुपम पल बिताएकी छु । सबै जातका मानिसहरूको बसोबास रहेको देवन्टार आफैँमा प्राकृतिक मनोरमले भरिपूर्ण...
सधैँझैँ बाटोतर्फ फर्किएको झ्याल खोलेर म त्यही झ्याल बाहिरको दृश्य तर्फ़ रमाउंछु आजपनि । छुट्टीको दिन त्यसै पनि रमाइलो त्यसमाथि घाम को किरणले धरातलनै उज्यालो बनेको छ आज । लाग्छ सुनौलो बिहानी र त्यसमाथि...
कथा: देश केले चलेको छ त्यो उसलाई थाहा छैन । जान्नेबुझ्ने परेकाहरू रेमिट्यान्सले भन्छन् र ऊ पनि त्यसै भनी टोपल्छ । तर उसलाई यत्ति चाहिँ थाहा छ कि उसको परिवार भने उसले विदेशबाट पठाएको पैसाले...
डिल्लीबजार जानु पर्ने भएकाले म बागबजारको बाटो हिँड्दै थिएं । पिके क्याम्पसको गेटनेर पुग्नै लाग्दा कोहि मेरो अगाडी आएर भन्यो-‘ के छ उषा ‘ ? कहिं देखे देखे जस्तो लाग्ने अनुहार र सुनेकै आवाज हो...